Yehowa Adansefo – abakᴐsԑm ne gyidi – 4Jehovah (Yehowa)
Posted in Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo Abakɔsԑm, Yehowa Adansefo Gyidi
Wᴐtee dwumakuw Ahorow abiԑsa: 1. Yehowa Adansefo Kristofo Asafo (Christian Congregations of Jehovah’s Witnesses), 2. Yehowa Adansefo som nnidiso (Religious Order of Jehovah’s Witnesses), 3. Ahenni dwumadi boafo (Kingdom Support Services)
Ͻwԑn Aban Sodikuw no gyae Ahyehyԑde dwumadi no hyԑe Mpanyimfo Kwankyerԑfo Boayikuw (Board of Dircectors) a Don A Adams da ano nsa.
2. Afe 2004 Yehowa Adansefo Akontabu nnidiso nnidiso.
Wᴐwᴐ Yehowa Adansefo Asԑmpakafo ᴐpepem nsia (6 million)
Nnᴐnhwerew ᴐpepepem biako ne ᴐpepem abien (1.2 billion) na wᴐde yԑe afie ne afie asԑmpaka adwuma afe biara.
Wᴐkyekyԑe Ͻwԑn Aban ne Nyan (Awake) nsԑmma nhoma bԑboro aman ahanu ne aduasa (230).
Wᴐyԑe Bible adesua ᴐpepem nsia (6 million) de boa wᴐn a wᴐbegye ᴐwԑn Aban Nkyerԑkyerԑ atom abԑyԑ asomfo.
Wᴐwᴐ Asafo ahorow mpem aduᴐkron nwᴐtwe (98000)
3. Wofae Adventist ᴐsom mu gyidi ahorow no batae wᴐn nkyerԑkyerԑ ho tintimii.
Yesu Kristo Ahenni tumidi mmae a wᴐkae sԑ enyae mmamu wᴐ 1874 no wᴐyԑԑ nsesa sԑ ԑyԑ afe 1914 mmom.
Nsrahwԑ Atemmusԑm: Yesu yԑe honhom fam aduan a wᴐde maa ho nhwehwԑmu nsrahwԑ efii afe 1874-1878, wᴐ nsesan bԑyԑԑ afe 1914-1919.
Ahwehwԑde a ԑkyԑrԑ sԑ -Ͻkra no wu owu mu, owusᴐre ma wᴐn a wofata, Daa asotwe (Hell) biara nni hᴐ.
Wobesiesie asase bio ama abԑyԑ paradise.
Atoro Nkᴐmhyԑ Mmere.
Afe 1874: Na Yesu Kristo Ahenni Tumidi nyae mmamu, nanso ԑbaa mu wᴐ afe 1914.
Afe 1914: Wiase bԑba nawiei.
Afe 1915: Yԑ bere a wiase no bԑba awiei na ԑnyԑ afe 1915.
Afe 1918: Wiase awiei bԑba, na wᴐasԑe nsᴐre ahorow.
Afe 1925: Wiase bԑba nawiei na Abraham, Isak ne Yakob benyane aba asase so bio.
Wᴐ afe 1929, ‘Beth Sarim’ wosii Abirimpᴐn dan wᴐ San Diago de maa Ͻhene Dawid ne adiyifo anokwafo a ԑnkyԑ wᴐreba asase so bio.
Wᴐ afe 1940 Harmagedon ko no de wiase no bԑba awiei na ԑrenkyԑ koraa.
Afe 1975: Mfe mpem nsia (6000) wᴐ nnipa abakᴐsԑm mu no wiase awiei no bԑba ᴐsram a edi ho na ԑnyԑ mfe.
Afe 1994. Awo notoaso a efi 1914 de wiase no bԑba, awiei bԑyԑ mfe aduonwᴐtwe (80), Nanso wᴐ afe 1995 wᴐkyerԑԑ awo notoaso ase sԑ afei ԑyԑ sԑnkyerԑnne kwan so ahosiesie a edi wiase sԑe no anim.
4. Nneyԑe ahorow a ԑho wᴐ nsԑm.
Wonni nnapᴐna anaa awoda
Wᴐnnkyia fraska, wᴐnnto aba mpaw ᴐman mpanyimfo, wᴐnnfa woho nhyԑ amanyᴐsԑm ne akodi mu.
Wᴐnnkᴐ sukuu nkᴐ akyiri.
Wᴐne wᴐn a wᴐnyԑ Yehowa Adansefo mmᴐ feku.
Wᴐne obi a woagyae Yehowa Adansefo som nkasa, na kapԑsԑ wᴐakyia no.
Wᴐbara nhoma ahorow a ԑkasa tia Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde no denneenne.
Wᴐbara sԑ ԑsԑ sԑ obi betie ᴐsom afoforo nkyerԑkyerԑ anaa mpo sԑ wobԑkᴐ wᴐn asᴐredan mu.
Wᴐhyԑ wᴐn sԑ ԑsԑ sԑ obi biara kᴐ afie ne afie asԑmpaka de boa afoforo ma wᴐbԑyԑ Yehowa Adansefo.
5. Yehowa Adansefo Bible –Wiase Foforo Nkyerԑase.
Asekyerԑfo nni nimdeԑ biara wᴐ tete Nkyerԑwde a wᴐde kyerԑw Bible no.
Asekyerԑfo no kyikyim Yesu Nyamesu adwene a ԑwᴐYohane 1:1, 5:58, Hebrifo 1: 8ne nkyerԑase afoforo de afoa ᴐwԑn Aban Nkyerԑkyerԑ a ԑkotia Yesu sԑ Nyankopᴐn.
Wode Onyankopᴐn din Yehowa ahyԑ Apam Foforo no mu, wᴐ bere a tete Bible Nkyerԑwde mma kwan.
6. Yehowa Adansefo Gyidi ne Kristosom Nkyerԑkyerԑ Ntotoho.
ϽWԑN ABAN GYIDI NE NKYERԑKYERԑ KRISTOSOM GYIDI NE NKYERԑKYERԑ
Agya no nkutoo ne nokware Nyankopᴐn ‘Yehowa’. Yehowa Nyankopᴐn ne Agya, Ͻba ne Honhom Kronkron-Mateo 28:19, Yesaia 48:16, Sakaria 2:8-11, 11:13, 12:10, 2 Samuel 23:2-3, Yohane 1:1-3, 20:28, Hebrifo 1:8.
Wᴐbᴐᴐ Yesu, na afei ᴐyԑ Ͻbᴐfopᴐn Mikael. Wᴐammᴐ Yesu. Ͻyԑ Onyankopᴐn-Yesaia 9:6, Hebrifo 7:3, Yesaia 44:24, Yohane 1:3, Yesaia 48:12, Adiyisԑm 1:7-8, Filipifo 2:5-11.
Yehowa nyanee Yesu fii owuo mu sԑ honhom nipadua te sԑ ᴐbᴐfo a ԑnyԑ ne honam nipadua. Yesu nyanee ne honam nipadua fii owuo mu sԑ honam nipadua a edi mu ne Nyamesu titiriw ankasa-Luka 24:39, Yohane 2:18-22, 10:17-18, Asomafo 17:31, Filipifo 2:5-11.
Onyankopᴐn Honhom kronkron yԑ tumi a enni nipasu. Honhom Kronkron yԑ Nyankopᴐn na afei nso ᴐwᴐ nipasu-Romafo 8:27, 1 Korintofo 2:10-11, Asomafo 5:3-4, 1 Korintofo 3:16-17, 2 Korintofo 3:17.
Mpem ᴐha aduanan anan (144000) kuw nkutoo na wotumi kyerԑkyerԑ Bible mu nsԑm. Gyidifo nyinaa wᴐ hokwan ԑdenam Onyankopᴐn Honhom Kronkron so etumi kyerԑkyerԑ Bible mu nsԑm-Yohane 16:13, 1 Yohane 2:27.
Nkwagye nam Yehowa ne Yesu mu gyidi so ne Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde nnwuma mu mmᴐdenbᴐ. Yesu nkutoo mu na nkwagye wᴐ-Yohane 5:39-40, 10:25-29, 14:6, Asomafo 4:1.
Yesu ԑnyԑ ntamgyinafo mma adesamma na mmom ma nnipa mpem ᴐha aduanan anan (144000) Yesu yԑ ntamgyinafo ma obiara ᴐwᴐ ne mu gyidi- 1 Timoteo 2:5-6
Ͻsoro kᴐ ne Honhom kronkron awo foforo no yԑ kristofo nnipa mpem ᴐha aduanan anan fi afe 33 Y.B mu bԑsii afe 1935 Yԑn Bere mu. Gyidifo nyinaa nya honhom Kronkron awo foforo mu kyԑfa ne daa nkwa ahosan wᴐ ᴐsoro-Yohane 3:3-7, 1:12, 1 Yohane 5:1, Adiyisԑm 7:9-13, 19:1
Wᴐn a wobenya nkwa wᴐ Harmagedon no akyi no bԑsiesie asase no amma abԑdan Paradise wᴐ Yesu mfe apem nniso ase. Gyidifo nyinaa benya hokwan atena ᴐsoro ne asase so, na mpo bԑnya kwan aforo soro asian aba asase so te sԑ bere a Yesu Kristo nyanee fii owu mu no-Mateo 8:11, Luka 13:28-29, Hebrifo 11:13-16, 1 Tesalonika 4:14:17, Asomafo 1:11, 1 Yohane 3:2
Nnipa wu a ᴐkra no nso wu. Nnipa kra nnwu wᴐ owu mu, na ԑtena hᴐ daa. Mateo 10:28, 2 Korintofo 5:8, Filipifo 1:23-24, Adiyisԑm 6:9-11.
Asԑmfua ‘Hell’ nkyerԑ beae a wᴐtwe abᴐnefo aso na mmom ԑyԑ adesamma adamoa ho sԑnkyerԑnne. Asԑmfua ‘Hell’ kyerԑ daa asotwe-Mateo 25:46, Marko 9:43, 47-49, Luka 16:22-29, Adiyisԑm 14:9-11, 20:13-15, 21:8.
Kristofo mfa wᴐho nhyԑ akodi, abatow ne amanyᴐsԑm mu. Kristofo yԑ nkyene ne akanea wᴐ wiase asetra kwan biara so, sԑ amanyᴐsԑm oo anaa akodi oo, ԑsԑ sԑ wᴐabrabᴐ pa yԑ nhwԑso-Mateo 5:13-16, 8:5-13, Asomafo ne Nnwuma 10, Romafo 16:23, Ͻsԑnkafo 3:8.
Mogya a wᴐgye kᴐ honamdua mu no tia Onyankopᴐn mmara ԑka sԑ mma yenni mogya te sԑ aduan. Mogya wᴐgye kᴐ honamdua mu no ԑhyԑ mogya a ahwerԑw honamdua no ananmu, ma enti honamdua no nnyam mogya te sԑ nea ᴐyam aduan ara pԑ. Ne saa nti Kristofo mpo sԑ etia mogya mmara a onyankopᴐn de mae.
Yesu wui wᴐ asendua so na ԑnyԑ mmeamudua. Mmeamudua yԑ abusude a ԑyԑ abosonsom a gyiraehyԑde. Yesu wui wᴐ mmeamudua so, na ԑnyԑ asendua. Mmeamudua no yԑ nea wobu no sԑ a honhom fam abusuabᴐ a ԑda agyidifo ne Yesu Kristo ntam-Yohane 20:25, Mateo 27:37, 1 Korintofo 1:18.
Wᴐabara Nyamesom ne asetram mu nnapᴐna nyinaa, te sԑ buronya Gye sԑ Yesu Kristo wuo ho Anwummere aduan ho nkaedi nkutoo ne nea ԑfata kristofo. Kristofo wᴐ ho kwan paw sԑ wobedi nnapᴐna ahorow biara wᴐpԑ-Romafo 14:5-6, Kolesefo 2:16,
Yesu dii nnapᴐna ‘Hanukah’-Yohane 10:22-23,
Hiob mma dii wᴐn awoda, Hiob 1:4.
Tagged Atoro Nkɔmhyԑ, Gyidi mu Nsakrae
← So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa?
Wodi Yehowa Ni? →